Katarisma - Wikipedia
Ny katarisma dia fihetsiketsehana doalista ara-pivavahana kristiana nandritra ny Andro Antenantenany tao Eoropa, indrindra tao amin'ny faritra atsimo ao Frantsa. Mino ny adin'ny Tsara sy ny Ratsy, izay fampianarana noraisiny tamin'ny manikeisma, ny katarisma; izany dia taratry ny fifangaroan'ny tontolo ara-panahy noforonin'Andriamanitra izay mifanohitra amin'ny tontolo ara-draha noforonin'i Satana. Tsy miankina loatra amin'ny teolojia ny katarisma satria aminy Andriamanitra dia tsy azo fantarina sady tsy azon-kevitra, ary tsy eto amin'izao tontolo izao. Amin'ny Katara dia miampitampita amin'ny alalan'ny fitaranahan'ny olombelona ny fanahy avy amin'ny olona volalohany, na avy amin'ny fifindran'izany aorian'ny fahafatesana ao amin'ny zaza vao teraka. Ny Fanahy Masina irery ihany no afaka manafaka ny fanahy amin'ny tontolo azo tsapain-tanana, ary amin'ny alalan'ny batisa sy ny fametrahan-tanana azo avy tamin'ireo apostoly ary nampitain'izy ireo no ahafan'ny fanahy hahazo ny Famonjena. Avy amin'ny fivoasany ny Testamenta Vaovao izany, indrindra ny Evanjelin'i Joany sy ny Evanjelin'i Lioka. Nandika ny Testamenta Vaovao amin'ny fiteny oksitàna ny Katara tamin'ny taonjato faha-13 nefa tsy nankasitrahin'ny Fiangonana katolika izany.
Tsy niantso ny tenany hoe Katara tsy akory ny mpomba ireo fihetseketsehana ireo, ka betsaka ny mpikaroka no mbola manontany raha tena nisy marina ireo fihetsiketsehana ireo, na dia eken'ny rehetra fa nisy ny ady nataon'ny Fiangonana romana amin'ny fampianaran-diso izay nifarana tamin'ny fandripahana ny Albigesy tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-13.
Avy amin'ny teny grika hoe καθαρός / katharós, izay midika hoe "madio" izany anarana izany. Io teny io dia nalain'ilay moanina (na monka) atao hoe Eckbert von Schönau tamin'ny taonjato faha-12 avy amin'ny soratr'i Agostino avy any Hipono mba hanondroana ireo mpanaraka fampianaran-diso, ka lasa fantatry ny rehetra amin'ny teny frantsay noho ny fampiasana ny teny avy any Oksitania tamin'ireo taona 1960 ka nasolo ny hoe "fampianaran-diso albigesy" na "albigeisma" na "albigesy" izay nampiasaina kokoa hatreo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Katarisma&oldid=1000223"
Voaova farany tamin'ny 13 Janoary 2021 amin'ny 14:20 ity pejy ity.